Ogaden News Agency (ONA) – Xerada Qaxootiga Dhagaxley oo Culumada ay ka Jeediyeen Muxaadarooyin – (Dhagayso)
Xerada Qaxootiga Dhagaxley oo Culumada ay ka Jeediyeen Muxaadarooyin – (Dhagayso)
Posted by ONA Admin	/ October 11, 2014
Maanta oo Khamiis ah taariikhduna ay kubeegantahay 9/10/14 waxaa xerada qoxootiga Dhagaxlay ee deegaanka Dhadhaab lagu qabtay muxaadaro aad uqiimo badan oo ay soo qaban qaabiyeen Dalada culimada Ogadenia ee ka dhisan bariga Africa. Muxaadaradan oo ahayd mid siwayn loo soo qabanqaabiyay in muda ahna lasugayay ayaa waxaa kasoo qaybgalay inta badan xubnaha Faraca Midnimo ee ka dhisan xerada Dhagaxlay waxaa sidoo kale kasoo qaybgalay dadbadan madashii ay muxaadaradu ka socotay.
Munaasabada ayaa bilaabatay abaare 2:30 duhurnimo waxaana furay gudoomiyaha culimada qaybta Dhagaxlay Sh aadan macalin cali wuxuuna sheekhu soo jeediyay khudbad kooban isagoo kawarbixiyay waxa ay kusaabsantabah muxaadaradu wuxuuna sheekhu dadkii muxaadarada dhagaysanayay kacodsaday in ladamiyo gabi ahaanba telefoonada dhaqdhaqaaqana layareeyo wuxuuna kusoo dhaweeyay sh maxamad irshaad oo ah gudoomiyaha guud ee dalada culimada bariga Africa wuxuuna sheekhu soo jeediyay muxaadaro aad uqiimo badan oo uu intabadan ama guud ahaanba kaga hadlayay Jihaadka ay umada ree Ogadenia kula jiraan gaalada kusoo duushay diintoodii iyo dalkoodii dadkoodiina xasuuqday.
1. Muxaadarada 1aad
Sheekha ayaa ugu horaynba furfurasho kadib kahadlay jihaad iyo micnihiisa wuxuuna ka dhawaajiyay in uu jihaadku yahay mid kamid ah camalada laqabto kuwa ugu waawayn sidoo kale sheekha ayaa xusay in jihaadka Ogadenia kasocda uu yahay fardul-cayn qofkasta oo ogadeniyan ahna looga baahanyahay in uu u istaago jihaadkaas naf iyo maalba wuxuuna sheekhu intaas raaciyay in raga, dumarka, adoomada iyo guud ahaan dadka S.ogadenia uu waajib kuyahay jihaadku.
Sidoo kale sheekha ayaa aad ugu dheeraaday jihaadkii ay gaalada lagaleen Rasuulkii S.C.W iyo asxaabtiisii iyo wadadii ay umari jireen jihaadkaas isagoo xusay sidii ay ugu kala tartami jireen asxaabtu. Sidoo kale sheekh maxamad irshaad ayaa soo hadal qaaday dad uu ku sheegay kuwo huwan shaadhka diinta islaamka oo ku hadaaqaya in uusan jihaad ahayn dagaalka Ogadenia kasocda wuxuu sidoo kale sheekhu ka hadlay in wadan loodagaali karo iyo in kale taas uu ay dad badan shaki galiyaan wuxuuna sheegay in loo dagaalami karo 4 xaalo oo uu rasuulku sheegay wadankuna uu kamid yahay sida uu sheekhu sheegay isagoo soo qaadanaya Axaadiis uu Rasuulku S.C.W kaga waramay arimahaas.
2. Muxadarada 2aad
Khudbada sheekha oo aad udheerayd ayay dadku aad ugu dhag taagayeen wuxuuna in badan ku celceliyay in ay dhalintu ka faa’iidaysato fursadaha ay hada haystaan isagoo allaah ugu mahadiyay in uu naga dhigay bini’aadam oo uu allaah qur’aankiisa kusheegay in uu karaameeyay waliba uu kadhagay kuwo muslim ah ayna tahay in allaah loogu mahad celiyo.
Dhanka kale waxaa hadalka lagu soodhaweeyay sheekh xassan raage oo isagoo ukabaya sheekhii kahoreeyay kahadlay dhowr qodob oo muhiim ah wuxuuna sheekhu dhalanta kuguubaabiyay in ay u istaagaan sidii ay cadawga wadankeenii ku habsaday dadkeeniina xasuuqay isga dulqaadi lahaayeen iyagoo kaashana allaah.
3. Muxaadarada 3xaad